Wholesale PPR PPR, PPR PPR PPR SCES Mpanamboatra sy mpamatsy | Shingfong
Niorina tamin'ny 1996, Shingfong mpanamboatra matihanina amin'ny PVC Trunking, PVC Conduit, PPR Pipe ary ny fittings mifandraika
Pvc arc gorodona trunking
Graicit Electrical PVC
Pvc Plexible Pipe
PVC Cold Miankohoka
Ppr mafana sy mangatsiaka fantsona
Fitaovana PVC sy PPR
an-trano > Products > Ppr mafana sy mangatsiaka fantsona
Ny PPR tsara indrindra PPR sy mangatsiaka rano
PPR tsara indrindra PPR mafana sy mangatsiaka.Ity vokatra ity dia azo antoka ampiasaina. Izy io dia vokarina mifanaraka amin'ny fisotroana rano fisotroana ny fenitry ny fiarovana.1. Fampiasana eca-namana sy azo antoka kokoa, tahiry angovo2. Ny fanoherana ny mari-pana avo, ny fanoherana, ny fanoherana ny fiatraikany3. Ny lanjany maivana, ny rafitra ambany sy ny fikojakojana4. Fiainana tsara
Pipe PPR tsara indrindra ho an'ny ozinina rano mangatsiaka sy mafanaPrice | Shingfong
Pipe PPR tsara ho an'ny fanamboarana rano mangatsiaka sy mafana, antsipirihany momba ny pipa PPR ho an'ny rano mangatsiaka sy mafana
Mahatsara azy: (1) fanoherana ny hafanana avo: Ny mari-pana miasa maharitra hatramin'ny farany dia hatramin'ny 70 Degre Celsius, Ny mari-pana maharitra farany ambony dia hatramin'ny 95 Degre Celsius. (2) Fitehirizana hafanana: Fitaovam-pitantanana hafanana ambany izay 1/1500 amin'ny fantsom-by fotsiny, ary fantsom-by vy 1/250. Tsy misy poizina: tsy misy additives vy mavesatra no tsy hosaronan'ny loto na voaloton'ny bakteria. (3) Manohitra ny fanimbana: Tohero ny raharaha simika na ny harafesin'ny simika elektronika. (4) Ny vidin'ny fametrahana ambany: Ny lanjan'ny maivana sy ny fanamorana ny fametrahana dia afaka mampihena ny vidin'ny fametrahana hatramin'ny 50% mihoatra ny rafitra fantsona vy. (5) Fahaiza-manao ambony kokoa: Ny rindrina anatiny malama dia miteraka fahaverezan'ny tsindry ambany sy habe avo kokoa noho ny fantsom-by. (6) Ela velona: 50 taona mahery ao anatin'ny toe-javatra mahazatra. (7) Recycled sy tontolo iainana.